Sheeko qosol leh: Oday waayeel oo bakoorad la dhacay Raila Odinka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Oday waayeel ah ayaa hogaamiyaha Mucaaradka Kenya, Raila Odinga, ku uleeyey meel fagaare ah ku uleeyay. Ninka ayaa ilaa laba bakooradood ku dhuftay Raila Odinga oo ka qayb qaadanayay Fagaare uu ka socday Olole Siyaasadeed
Warbaahinta Kenya ayaa aad u qaadaa dhigtay Arintan. Ninka Odayga ahaa ka soo dhexbaxay dadkii Fagaaraha ku sugnaa ka dibna bakooradiisa gacanta la dhacay Raila Odinga, isagoo tiraba laba jeer la gaadhay ka hor intaan Ilaaladiisu ka qaban oo aanay Ninkaasi xakamayn.
Raila Odinga ayaa la arkayay isagoo Xanuunsaday islamarkaana Xoqanaya meesha Bakooraddu kaga dhacday oo Dhabarka iyo Garabka ku beegan.
Ninkan ayaa islamarkiiba la iska sii daayay ka dib markii loo qaatay inuu Xanuunsanayo ama aanu u caafimaad qabin Maskax ahaan, balse Ninkan ayaa markii dambe sheegay in Xaaskiisa oo ka qayb galaysay Bandhig dhaqameedk Fagaaraha ka socday uu la ciyaaray Raila Odinga
Ninkan oo ka xanaaqay Arintaas ayaa bakaroodiisa ula tagay Raila Odinga oo la ciyaaraya dumar Xaaska Odaygani ka mid tahay.waxa uu sheegay in Mr Odinga Aad ugu dhawaaday Xaaskiisa
Waxaa uu sheegay in xaaskiisa aanay fasax ka qaadanin ka hor inta aanay Raila kala qeybgelin cayaar dhaqameedka.
Sawirro: Yuu kula yahay dalkaan ciriiriga gaadiidku wareeriyey?